Sadaasaa 22, 2021
Poolisiin naannicha yeroo sakata'u, Wiskaansen, Saadaasa 21, 2021
Kutaa Wiskaansen Waukeshaa keessatti dilbata kaleessaa ayyaana dhaloota Goofta Yesuus dura agarsiisa qophaa’ee uummanni irratti argametti konkolaataa saffisaan jamaa sana gidduu namni oofe tokko namoota shan ajjeesee dargaggoota hiriira sana miidheksaa turan 40 ol madeessee jira.
Ajajaan Poolisii Waukeeshaa Daan Toomsen akka jedhanitti namni dhimma kanaan wal qabate to’annaa jala kan oole yoo ta’u, konkolaataan balaa sana geessise kutaa Miliwaakii gama dhiyaatti fageenya km 32 iraatti magaalaa argamtu keessatti argamee jira.
Yeroo ammaa namoonni shan du’uu isaanii fi 40 ol madaa’uu isaanii mirkaneessuu dandeenya jechuu dhaan kutaan ajaja poolisii Wu’aakeshaa fuula Feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Haa ta’u malee ragaalee kanneen biroo ennaa walitti qabnu, lakkoobsi kun jijjiiramuu danda’a jedhee jir. Namoonni hedduun illee ofii dhuma isaanii wal’aansaaf gara hospitaala naannoo jiru dhaqaniiru jedhee jira kutan poolisichaa.
Gochi kun shororkeessummaatti hidhata qabaachuu isaa waan beekame hin jiru,garuu balaan itti dablaa hin jiru. Magaalaa uummata kummi 72,000 keessa jiraatu ajaji manaa akka hin baaneef darbee tures ka’ee jira jechuu dhaan Toomsen tuuta oduuf ibsa kennanii jiru.
Uggurri Sa’aa Naanoo Uummattoota Kibbaa Ka’ee JIra
Rakkoo Namoomaa Naannoo Amaaraa Keessaa
Bilinken Ennaa Afriikaa Daawwatan Sudaanii fi Itiyoophiyaan Mata Duree Marii Geggeessanii Ture